Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Natiijooyinka Jupiter-ka cusub ee NASA Juno Probe
Natiijooyin cusub oo ka soo baxay NASA's Juno probe orbiting Jupiter ayaa siinaya sawir buuxa oo ku saabsan sida meeraha meeraha u gaarka ah iyo midabka midabka leh ay u bixiyaan tilmaamo ku saabsan hababka aan la arki karin ee ka hooseeya daruurihiisa. Natiijooyinku waxay muujinayaan shaqada gudaha ee suumanka iyo aagagga daruuraha ku wareegsan Jupiter, iyo sidoo kale duufaannada dabaylaha ah iyo xitaa Goobta Cas ee Weyn.
Cilmi-baarayaashu waxay daabaceen dhowr waraaqood oo ku saabsan sahannada jawiga Juno maanta ee joornaalka Sayniska iyo Joornaalka Cilmi-baarista Geophysical: Planets. Waraaqo dheeri ah ayaa ka soo muuqday laba arrimood oo dhowaan ah Warqadaha Cilmi-baarista Juquraafiga.
"Indho-indhayntan cusub ee Juno waxay furaysaa khasnadda macluumaadka cusub ee ku saabsan sifooyinka Jupiter ee la arki karo," ayay tiri Lori Glaze, oo ah agaasimaha qaybta sayniska meeraha ee NASA ee xarunta dhexe ee wakaaladda ee Washington. "Warqad kastaa waxay iftiiminaysaa dhinacyada kala duwan ee hababka hawada meeraha meeraha - tusaale cajiib ah oo ku saabsan sida kooxaheena sayniska ee kala duwani ay u xoojiyaan fahamka nidaamka qoraxdayada."
Juno waxa uu soo galay wareegtada Jupiter sanadkii 2016. Intii lagu guda jiray mid kasta oo ka mid ah 37-kii meeraha dayax-gacmeedka ee meeraha ilaa maanta, qalab gaar ah oo qalabaysan ayaa ka hoos arkay sagxaddeeda daruureed ee kacsan.
"Markii hore, Juno wuxuu nagula yaabay tilmaamo ah in ifafaalaha jawiga Jupiter ay ka qoto dheeraadeen sidii la filayay," ayuu yiri Scott Bolton, baaraha maamulaha Juno oo ka socda Machadka Cilmi-baarista Koonfur-Galbeed ee San Antonio iyo qoraaga qoraaga joornaalka Sayniska ee qoto dheer ee wareegyada Jupiter. "Hadda, waxaan bilaabaynaa inaan isku geyno dhammaan qaybahan gaarka ah oo aan helno fahamkeena dhabta ah ee ugu horreeya ee ku saabsan sida quruxda Jupiter iyo jawiga rabshadaha u shaqeeyo - 3D."
Juno's microwave radiometer (MWR) waxa ay u ogolaataa saynis yahanada hadafka in ay hoos eegaan dariiqa sare ee Jupiter oo ay baadhaan qaab dhismeedka duufaanada badan ee vortex-ka. Kuwa ugu caansan duufaannadan waa anticyclone astaanta u ah ee loo yaqaan 'Great Red Spot'. Dhulka wuu ka ballaadhan yahay, vortex-kan crimson-ka ahi waxa uu xiiseeyey saynisyahannada tan iyo markii la helay ku dhawaad ​​laba qarni ka hor.
Natiijooyinka cusubi waxay muujinayaan in duufaanadu ay yihiin kuwo kuleyl ah xagga sare, oo leh cufnaanta jawiga hoose, halka ay hoose ka qabow yihiin, oo leh cufnaanta sare. Anticyclones, oo u rogmado jihada ka soo horjeeda, way ka qabow yihiin xagga sare laakiin way ka diiran yihiin xagga hoose.
Natiijooyinka ayaa sidoo kale tilmaamaya in dabeylahan ay aad uga dheer yihiin sidii la filayay, iyadoo qaarkood ay 60 mayl (100 kiiloomitir) ka hooseeyaan daruuraha sare iyo kuwa kale, oo ay ku jiraan Goobta Cas ee Weyn, oo kor u dhaaftay 200 mayl (350 kiiloomitir). Daah-furkan la yaabka leh ayaa muujinaya in wareeggu uu daboolo gobollo ka baxsan kuwa ay biyuhu isku urursadaan iyo daruuraha, oo ka hooseeya gunta ay iftiinka qorraxdu ku diiriyaan jawiga.
Dhererka iyo cabbirka Barta Cas ee Weyn macnaheedu waa isku-ururinta cufnaanta hawada ee duufaanta oo suurtagal ah in lagu ogaan karo qalabka lagu baranayo goobta cuf-jiidadka Jupiter. Labo duullimaad oo Juno ah oo isku dhow oo dul maray goobta ugu caansan ee Jupiter ayaa siisay fursad lagu raadiyo saxiixa culeyska duufaanka oo ay ku dhammaystiraan natiijooyinka MWR qotonkiisa.
Iyada oo Juno uu hoos ugu safrayay sagxadda daruuraha Jupiter ee qiyaastii 130,000 mph (209,000 kph) Saynisyahanada Juno waxay awoodeen inay cabbiraan isbeddelka xawaaraha sida yar 0.01 milimitir ilbiriqsi kasta iyagoo isticmaalaya NASA's Deep Space Network raad anteeno fogaan ah in ka badan 400 milyan mayl (650) milyan kiiloomitir). Tani waxay awood u siisay kooxda inay xakameeyaan qoto dheer ee Barta Cas ee Weyn ilaa 300 mayl (500 kiiloomitir) oo ka hooseeya daruuraha dushooda.
Marzia Parisi, oo ah saynisyahan Juno ah oo ka tirsan Shaybaadhka Jet Propulsion Laboratory ee NASA ee Koonfurta California isla markaana ah hogaamiyaha qoraaga warqad ku jirta joornaalka Sayniska ee duullimaadyada culeyska culeyska Bar Cas oo Weyn. "Awood u lahaanshaha in aan buuxino MWR ee qoto dheer waxay ina siinaysaa kalsooni weyn in tijaabooyinka cufisjiitada mustaqbalka ee Jupiter ay keeni doonaan natiijooyin isku mid ah."
Suunka iyo Aagagga
Marka laga soo tago duufaannada iyo anticyclones, Jupiter waxaa loo yaqaanaa suumanka iyo aagagga kala duwan - cad iyo casaan guduudan oo daruuro ah oo ku wareegsan meeraha. Dabaylaha xooggan ee bari-galbeed ee u socda jihooyin iska soo horjeeda ayaa kala saara xadhkaha. Juno waxa uu hore u ogaaday in dabaylahan, ama durdurrada jet-ka, ay gaadhaan guntooda ilaa 2,000 mayl (qiyaastii 3,200 kiiloomitir). Cilmi-baarayaashu waxay wali isku dayayaan inay xalliyaan sirta ah sida qulqulka jet-ka. Xogta uu ururiyay Juno's MWR inta lagu gudajiray baasaska badan ayaa muujinaya hal tilmaan oo suurtagal ah: in gaaska ammonia jawigu kor iyo hoos u socdo isagoo la jaanqaadaya qulqulka jet-ka ee la arkay.
Keren Duer, oo ah arday ka qalin jabiyay Machadka Weizmann ayaa yidhi "Markaan raacno ammonia-ka, waxaan helnay unugyo wareeg ah oo ku yaal waqooyiga iyo koonfurta hemispheres kuwaas oo la mid ah dabeecadda 'Ferrel cells'. ee Sayniska ee Israa'iil iyo qoraaga hogaamiyaha ee warqadda Sayniska ee Joornaalka ee unugyada Ferrel-sida ee Jupiter. "Iyadoo uu dhulku leeyahay hal unug oo Ferrel hemisphere ah, Jupiter wuxuu leeyahay siddeed - mid kasta ugu yaraan 30 jeer."
Xogta MWR ee Juno waxay sidoo kale muujinaysaa in suumanka iyo aagagga ay maraan kala-guur qiyaastii 40 mayl (65 kiiloomitir) ka hooseeya daruuraha biyaha Jupiter. Marka la eego moolka gaagaaban, suunka Jupiter ayaa ka iftiimaya iftiinka microwave ka marka loo eego aagagga deriska ah. Laakiin heerarka qoto dheer, ee ka hooseeya daruuraha biyaha, liddi ku ah waa run - taas oo muujinaysa isku midka ah baddeena.
"Waxaan heerkan ugu yeereynaa 'Jovicline' anagoo isbarbar dhigna lakabka ku-meel-gaarka ah ee lagu arkay badaha Dunida, oo loo yaqaan heerkulbeegga - halkaasoo biyaha badda ay si aad ah uga gudubto qabowga qabow," ayuu yiri Leigh Fletcher, saynisyahan Juno ah oo ka tirsan Jaamacadda. ee Leicester ee Boqortooyada Ingiriiska iyo qoraaga hormuudka ah ee warqadda ku jirta Joornaalka Cilmi-baarista Geophysical: Planets oo muujinaya Juno's mikrowave indho-indheynta suumanka dhexdhexaadka ah ee Jupiter iyo aagagga.
Juno waxa uu hore u helay habab dhawr geesood ah oo duufaano waaweyn ah oo duufaanno wata oo ka dhacay labada tiir ee Jupiter- siddeed loo habeeyey qaab saddex geesood ah oo woqooyi ah iyo shan habaysan oo qaab afar geesood ah oo koonfurta ah. Hadda, shan sano ka dib, saynisyahano hawl-gal ah oo isticmaalaya indho-indheyn ay sameeyeen dayaxgacmeedka Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) ayaa go'aamiyay in ifafaalahan jawiga ay yihiin kuwo aad u adkeysi leh, oo ku haray isla goobta.
"Duufaannada Jupiter's waxay saameeyaan midba midka kale dhaqdhaqaaqiisa, taas oo keenaysa in ay ku meermeeraan meel siman," ayuu yiri Alessandro Mura, oo ah cilmi-baare Juno oo ka tirsan Machadka Qaranka ee Astrophysics-ka Rome, isla markaana ah hogaamiyaha qoraaga warqad dhawaan ku qoran Warqadaha Cilmi-baarista Geophysical on oscillations iyo xasiloonida. ee Jupiter's polar cyclones. "Dhaqanka rogrogadkan gaabis ah wuxuu soo jeedinayaa inay leeyihiin xidido qoto dheer."
Xogta JIRAM waxay sidoo kale tilmaamaysaa, sida duufaannada dhulka, duufaannadani waxay rabaan inay u dhaqaaqaan tiirarka, laakiin duufaannada ku yaal bartamaha tiir kasta ayaa dib u riixaya. Isku-dheelitirkani wuxuu sharxayaa halka ay dabaylaha degan yihiin iyo tirooyinka kala duwan ee tiir kasta.